China Cross reamer nke anụ grinder akụrụngwa na ndị na-eweta ngwaahịa | Atụmatụ
Nzube nke igwe eji esi nri eletrik bu ihe di mgbagwoju anya. Ejiri 2 ma ọ bụ 3 na-egbutu efere nke nha dị iche iche, dịka 3/16, 1/4 na 1/2 sentimita asatọ. Na mgbakwunye, igwe na-egwe ọka nwere ike ịnwe ngwa nri na ọtụtụ sọseji extrusion tub iji nyere aka na nfe nke sausaji ala n'ụdị casings dị iche iche. Maka ọtụtụ igwe na-egwupụta anụ, a ga-ewepụ mkpọchi ahụ. Igwe ọkụ eletrik nwere ike ịmepụta nri karịa obere mbọ.
Agụba ahụ dị nkọ, na-eguzogide ọgwụ, ndụ ogologo ndụ, ezigbo ike na ike, enweghị mgbapụ, enweghị nchara, enweghị mmetọ na ngwaahịa anụ.
Produst Aha Ihe onwunwe Ngwa Nkedo ndidi Akụkụ Ibu ibu
Ngwuputa igwe ihe eji eme ihe na ihe ndi ozo AISI 304 Ngwa nri ISO 8062 CT5 φ800 * 20mm 90 g
Cross reamer nke anụ grinder akụrụngwa AISI 304 Ngwa nri ISO 8062 CT5 60 g
China mincing igwe igba akụkụ AISI 304 Ngwa nri ISO 8062 CT5 1.2 n'arọ
Ogologo reamer anụ grinder akụrụngwa AISI 304 Ngwa nri ISO 8062 CT5 1,1 n'arọ
Anụ grinder bụ ụdị ngwa nri kichin, nke a na-eji egbue ya nke ọma na / ma ọ bụ gwakọta raw ma ọ bụ sie anụ, azụ, akwụkwọ nri ma ọ bụ nri yiri ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-anọchi ngwaọrụ dịka ndị na-egbu anụ, nke a na-ejikwa emepụta anụ anụ na ihe ndozi.
Esi ọcha anụ grinder akụkụ?
Tee mmanụ na mmanụ ma ọ bụ mmanụ nri ọkwa mmanụ na akụkụ nke igwe anụ grinder. Anyị na-akwado ka ị jiri karama ịgba maka ojiji dị mfe. Tupu i jiri anụ grinder, fesa ebe a gwara mmanụ na ihe ngwọta nke lita 3.8 nke mmiri na teaspoon nke ịcha ọcha. Jiri mmiri dị ọcha sachaa akụkụ nke ọ bụla iji wepụ ịcha ọcha.
Nke gara aga: Engineering ígwè akụkụ nke nnyefe anwụrụ
Osote: Echefuola wax wax mgbatị akụkụ maka anụ grinder
Beer valvụ akụrụngwa
Echefuola wax wax mgbatị akụkụ maka anụ grinder
Ngwuputa igwe na-etinye ihe maka akụrụngwa nri